Peji 5 - 5 Yakawanda Inotambudza WWE Nguva dzeKutanga kwema90's - Wwe
5 Yakawanda Inotambudza WWE Nguva dzeKutanga kwema90's
# 1 Yekupedzisira Murwi Anowana Akakiyiwa Mune YeMhepo Inovhara Casket
Undertaker anoisa Warrior mubhokisi
Rufu nemitero. Izvo ndizvo zvega zvinhu zviviri izvo munhu anogona kuve nechokwadi nazvo muhupenyu. Ivo vaviri vakamiririrwa muWWE. Mitero yakafukidzwa naIrwin R. Schyster, asi kufa kwaive kwa Undertaker.
The Ultimate Warrior aizoita chikanganiso chakakura nekuonekwa paPaul Bearer's Funeral Parlour muna 1991.
unoziva sei kuti unokwezva
Mutakuri akaburitsa tsika yakaitwa bhokisi rine Warrior's logo. Kutarisisa kwaWarrior kwaive kwakanyanya-kutarisa kuna Mutakuri uye nekunyengerera kwake zvekuti haana kuona Iye Undertaker achizeya achibuda mune rimwe bhokisi kumashure kwake.
Sezvakatarisirwa, Iye Undertaker akarwisa Warrior, achimukuvadza nekurova kwakasimba kubva kune simbi urn. Izvo zvakazoitika zvinotevera ndiyo chete inoshungurudza nguva yeWWE yehudiki hwangu hwese.
Undertaker akarova Warrior mukasiketi uye nerubatsiro rweMutakuri, akaikiya achishandisa maturusi epamba emariro. Ndakatya. Isu tese taive. Chikwata chekuzivisa hachina kubatsira nyaya.
Akazvikudza Roddy Piper akabvunza, 'Ari kufema sei imomo?' Undertaker naPaul Bearer vakabva vangoenda, vachisiya Mhare ari ega ndokuvharirwa murima rebhokisi remhepo. Vakatora zvishandiso vakaenda nazvo.
Vakuru vakaedza kutora Warrior kubva pane yake, asi vakashaiwa zviridzwa zvakakosha zvaida kuvhura bhokisi rakakiiwa. Zvakaitika kwaWarrior zvakaiswa mucherechedzo mukasiketi kaive musina mweya.
anoda kuve akasarudzika mushure memazuva matatu
Vakuru vakawana crowbar uye nesimba ravo rese kuyedza kuvhura bhokisi, asi kuyedza kwavo hakuna zvibereko. Mamiriro acho aive akaipisisa uye zvinhu zvaitaridzika kunge zvakakomba. Piper, aigara akadzikama, akashevedzera, 'Mubudise imomo.'
Makambani emishonga ekuzvidya mwoyo anoda zvinhu izvi. McMahon akatizve, 'Haana mweya.' Vakuru vakavhunduka kuyedza kuboora maburi emhepo kuti vawane mweya mubhokisi, sezvo vamwe vashandi vakapururudza nemidziyo yavaigona kuwana.
Ruzha rwakabatanidzwa rwekupopota uye vazivisi vacho vachiridza mhere zvaityisa zvakakwana, asi pavakazovhura bhokisi, Warrior akarara asina kumira mushe. Piper akarondedzera, 'Akaedza kubaya nzira yake yekubuda.' Akaedza.
Chivharo chakasimudzwa chakaburitsa pachena kuti Iyo Yekupedzisira Hondo yakanga isingateereri. Aive akafa Mugovera mangwanani terevhizheni.
Nemamiriyoni evana achiona, vakuru vakuru vakaedza kuita chimwe chinhu chairatidzika seCPR, asi hapana chakaonekwa sechishanda. Piper akasimbisa izvo isu tese taitoziva mumoyo medu, 'Akarega kufema.' Vakuru vakatanga kusundidzira pachipfuva chaWarrior mune yekupedzisira dhizaini yekuita kuti moyo wake urambe uri wega zvakare.
Sezvo nyika yakamirira neshungu kutarisira uye vana vanga vachinamata (uye vachichema) zvisati zvamboitika, Warrior akatanga kukosora uye zvakanyanya kukosha kufema. Zvese mune zvese, Warrior aive ari mukabhokisi kasina mweya kwemaminitsi mana, asi zvakaita kunge maawa. Aive akadii? Aizombogona kuita mutsimba zvakare? Aizorarama here? Takamanikidzwa kumirira rimwe vhiki kuti tivandudzwe.
hapana kumeso vs hapana kumeso
zvinhu zvakanakisa zvekuita kana kufinhwa kumba
ndezvipi zvinhu zvekutaura nezvazvo
maitiro ekugadzirisa hukama mushure mekunyepa
wwe superstars anodzoka muna 2017
ndiani aj masitaera akaroora